Video: US Mipi An Hrut Cang, Covid-19 In A Thi Mi Le A Zawmi An Karhtuk Lio Ah Nihin An Dirhmun – Chin 11 News
Video: US Mipi An Hrut Cang, Covid-19 In A Thi Mi Le A Zawmi An Karhtuk Lio Ah Nihin An Dirhmun
US ramchung New York khuapi chung cu coronavirus zawtnak in an him deuh nak hnga ding ah zulhphung an chuah mi vialte hna cu hramhram in kan duh lo tiah minung thong tamtuk nih an langhter than I “Black Lives Matter” sandahpiah nak ruang ah vunrang he vunnak he hmunkhat ah um in an au nak cu RT thawngzamh nih tuchun June 15, 2020 zanlei aharak thanh nak thawng in thawngtheihasi.
New York khuapi chung ah vunnak he vunrang he hmunkhat ah an um dih hna I vunrang palek kut inathi mi hna vunnak pawl caah lungtlin lonak le palek pawl dohdal nak ngei in an um hiasi. Nihin tiang ah US ramchung dirhmun hiatha leiapanh kho rih lo, Covid-19 inathi mi an tamtuk cang, mizaw an karh chin, ralring tein umkhawh nak ding le pumpak runven nakahaherh mi zulhphung an ser mi hna zong an zul duh ti hna lo.
Covid-19 runven nak ding ah Bar le Restaurant pawl nan ong rih hrim lai lo, nawl zulh loin nan on thanasi ah cun nan license kan I chuh dih hna lai tiah New York City ah nawl ngeitu hna nih an chim mi zong zeihmanh ah an rel ti hna lo. Cun leng nan chuah tikah Mask nan I bunh dih lai, social distancing tha tein nan zulh lai ti mi zong zeihmanh an zulh duh mi le an tuah duh miaum ti lo.
ကူးစက်ရောဂါကိုအံတုပြီး Black Lives Matter ဆန္ဒပြကြသူများ
အမေရိကန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုတွေ မြင့်တက်နေပေမယ့် အုံလိုက်ကျင်းလိုက် “Black Lives Matter” ဆန္ဒပြသူရှိနေ——- အကုန်သိ သတင်းဌာန ——- အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်ရှိ ဘရွက်ကလင်းစီရင်စုမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ချိုးဖောက်ပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက် “Black Lives Matter” ဆန္ဒပြနေကြဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ RT သတင်းဌာနမှ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းအရ သိရပါတယ်။ ဘရွတ်ကလင်းပြတိုက်အ၀န်းအ၀ိုင်းမှာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူဖြူတွေနဲ့ လူမည်းအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ စုပေါင်းပြီး လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့သူတွေအတွက် ဆန္ဒပြနေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆန္ဒပြလူအုပ်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့ပွားမှု နှေးကွေးအောင် ပြဌာန်းထားတဲ့ “ခပ်ဝေးဝေးနေစေခြင်း”စတဲ့ စည်းမျည်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ ဘား၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ချိုးဖောက်ရင် လိုင်စင်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ နယူးယောက်အစိုးရ Andrew Cuomo ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို လျစ်လျူရှုထားပုံ ရပါတယ်။ Cuomo က လမ်းမပေါ်မှာ လူစုလူဝေးဆန္ဒပြမှုများ မပြုလုပ်ဖို့ သတိပေးခဲ့ပြီး နှာခေါင်းစွပ် မ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို ဒဏ်ငွေရိုက်မယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အလားတူစွာပဲ နယူးယောက်မြို့တော်ဝန် Bill de Blasio က လူမှုရေး ဝေးကွာခြင်း စည်းမျည်းစည်းကမ်းတွေ မလိုက်နာသူတွေကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများ လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ထပ်ခါထပ်ခါ သတိပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ မြို့နယ်အများစုမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွတ် ဆန္ဒပြမှုတွေဟာ အကြီးအကျယ် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုတွေဟာလည်း ပြန်လည်မြင့်တက်လာနေပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ RT Unicode Versionအမရေိကနျမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျပြံ့ပှားမှုတှေ မွငျ့တကျနပေမေယျ့ အုံလိုကျကငျြးလိုကျ “Black Lives Matter” ဆန်ဒပွသူတှလေညျး ရှိနေ——- အကုနျသိ သတငျးဌာန ——- အမရေိကနျနိုငျငံ၊ နယူးယောကျရှိ ဘရှကျကလငျးစီရငျစုမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပိတျဆို့ကနျ့သတျမှု စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို ပျေါပျေါထငျထငျခြိုးဖောကျပွီး အစုလိုကျအပွုံလိုကျ “Black Lives Matter” ဆန်ဒပွနကွေဆဲ ဖွဈတယျလို့ RT သတငျးဌာနမှ ဇှနျလ ၁၅ ရကျနေ့ နလေ့ညျပိုငျးထုတျပွနျတဲ့ သတငျးအရ သိရပါတယျ။ ဘရှတျကလငျးပွတိုကျအဝနျးအဝိုငျးမှာ ထောငျပေါငျးမြားစှာသော လူဖွူတှနေဲ့ လူမညျးအဖှဲ့အစညျးတှဟော စုပေါငျးပွီး လူမြိုးရေး ခှဲခွားမှုကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ရဲ့ အကွမျးဖကျမှုနဲ့ သဆေုံးသှားခဲ့သူတှအေတှကျ ဆန်ဒပွနကွေတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဆန်ဒပွလူအုပျဟာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျပြံ့ပှားမှု နှေးကှေးအောငျ ပွဌာနျးထားတဲ့ “ခပျဝေးဝေးနစေခွေငျး”စတဲ့ စညျးမညျြးစညျးကမျးတှနေဲ့ ဘား၊ စားသောကျဆိုငျတှမှော ဗိုငျးရပျဈကာကှယျရေး စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ ခြိုးဖောကျရငျ လိုငျစငျသိမျးမယျဆိုတဲ့ နယူးယောကျအစိုးရ Andrew Cuomo ရဲ့ ခွိမျးခွောကျမှုကို လဈြလြူရှုထားပုံ ရပါတယျ။ Cuomo က လမျးမပျေါမှာ လူစုလူဝေးဆန်ဒပွမှုမြား မပွုလုပျဖို့ သတိပေးခဲ့ပွီး နှာခေါငျးစှပျ မဝတျဆငျထားတဲ့ ဆန်ဒပွသူတှကေို ဒဏျငှရေိုကျမယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ အလားတူစှာပဲ နယူးယောကျမွို့တျောဝနျ Bill de Blasio က လူမှုရေး ဝေးကှာခွငျး စညျးမညျြးစညျးကမျးတှေ မလိုကျနာသူတှကေို ဒဏျခတျအရေးယူမှုမြား လုပျဆောငျသှားမှာဖွဈကွောငျး ထပျခါထပျခါ သတိပေးပွောကွားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ မွို့နယျအမြားစုမှာ လူမြိုးရေးခှဲခွားမှုနဲ့ ရဲတပျဖှဲ့တှရေဲ့ ရကျစကျကွမျးကွုတျမှုတှကေို ဆနျ့ကငျြကနျ့ကှတျ ဆန်ဒပွမှုတှဟော အကွီးအကယျြ ဆကျလကျဖွဈပှားနဆေဲဖွဈပွီး နိုငျငံတှငျး ဗိုငျးရပျဈကူးစကျပြံ့ပှားမှုတှဟောလညျး ပွနျလညျမွငျ့တကျလာနပွေီ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ RT
Posted by AKonThi on Monday, June 15, 2020